Cabdulfataax Al-siisi oo la wareegay hoggaanka Midowga Afrika - Halbeeg News
Madaxweynaha dalka Masar, Cabdulfataax Al-siisi ayaa loo doortay guddoomiyaha Midowga Afrika, kadib kulan ay madaxda dowladaha xubnaha ka ah Midowga Afrika ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Masar ayaa qabatay xilkan markii ugu horeysay tan iyo markii ururka la aasaasay 2002-dii. Booskan ayaa waxaa shantii sanaba isku baddala madaxda wadamada afrika.
Madaxweynaha dalka Masar Mudane Siisii ayaa xilka kala wareegay Madaxweynaha dalka Ruwanda, Paul Kagame oo mudda xileedkiisii diiradda ku saaray hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee Afrika.
Madaxweynaha dalka Masar ayaa looga fadhiyaa in uu mudda xileedkiisa diiradda ku saaro la dagaallanka kooxaha hubeysan ee sharcidararrada ah iyo in uu dadaal geliyo dib u kabashada waddamada dagaallada iyo khilaafaadka ka soo reysanaya.
“Argagaxisanimadu waaa kansar ku yaalla Afrika kaas oo xadaya riyooyinka dadkeenna. Waa inaan baarnaa lana dagaalannaa dadka maalgeliya argagixisada Afrika,” ayuu yiri Madaxweyne Siisii wax yar kadib markii loo doortay Guddoomiyaha Midowga Afrika.
Dalka Masar ayaa laga saaray xubinimada Midowga Afrika kaddib afganbigii uu Siisii ku qabsaday dalka Masar, hasayeeshii isla isagii ayaa loo dhiibay markale hoggaaminta qaaradda, taasoo aad loo dhalleeceeyay.
Hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa aad ugu walaacsan qabashada hogaanka Midowga Afrika uu qabtay Siisii. Amnesty ayaa u aragta Siisii inuu yahay nin diiwaankiisu madowyahay oo geystay xad-gudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Madaxweyne Siisii ayaa xukunka ka riday isla markaana xabsiga dhigay madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi, Maxamed Mursi, iyadoo sidoo kalana xabsiyada Masar ay ka buuxaan dad badan oo u xiran aragtiyahooda siyaasadeed.